Kenya site na Njem Nchekwa iji kwụsị njem
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya » Kenya site na Njem Nchekwa iji kwụsị njem
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • Iwughachi • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Kenya bụ otu n'ime obodo izizi akpọrọ maka njem njem njem nchekwa njem si World Travel and Tourism Council (WTTC) na Safer Tourism Seal nke World Tourism Network (WTN).
Site na asambodo njem njem abụọ na-akwado mba ahụ, a manyere Kenya itinye iwu mgbochi ozugbo.
Akụkụ nke atọ nke COVID-19 nwere ọnụ ọgụgụ nke ikpe kwa ụbọchị na ọnụ ọgụgụ PCR positivity adịlarị nnukwu elu nke ebili mmiri gara aga.
Lọ ọgwụ ọha na nkeonwe na Nairobi na-akọ na oghere nchekwa COVID-19 na-ejupụta na ikuku oxygen na-azọpụta ndụ nwere ike isiri ike ijide.
Mgbe COVID-19 coronavirus jidere gburugburu ụwa, World Travel & Tourism Council (WTTC) wee jiri Nchekwa Njem Njem ha pụta. Emepụtara stampụ a site na nzukọ maka ndị njem ịmara njem na azụmaahịa gburugburu ụwa nke nabatara usoro iwu nchekwa na usoro ịdị ọcha zuru ụwa ọnụ nke SafeTravels.
Taa, njem Kenya na-akwụkwa dị ka ihe atụ na enwebeghị mmeri nje a, ọbụlagodi na mgbe ụfọdụ ọ na-adị ka ọ na-ele ya anya mbụ. Na enweghị naanị otu asambodo njem njem abụọ na-akwado mba ahụ, a manyere mba a ugbu a itinye ihe mgbochi ndị a, na-adọba breeki mberede dị ka ọtụtụ mba ndị ọzọ, gụnyere Germany.
Dabere na ebe nrụọrụ weebụ US Embassy na Kenya, n'ihi mmụba na-arịwanye elu nke COVID-19, mmachi ọhụrụ dị adị ozugbo. Na nke atọ a nke COVID-19, ọnụ ọgụgụ nke ikpe kwa ụbọchị na PCR positivity ọnụego gaferela elu elu nke ebili mmiri gara aga.
Thelọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) ewepụtala ọkwa ọkwa njem nke anọ maka Kenya. Oha na-ebunye coronavirus na Kenya gbasatara oso n'ike. Lọọgwụ ọha na nkeonwe na Nairobi na-akọ na oghere nchekwa COVID-4 ha na-ejupụta. Ogwu oxygen na-azọpụta ndụ nwere ike isi ike ịnweta.
Na Machị 26, Onye isi ala Kenyatta kwuputara mmachi ọzọ na mmebi nke ọrịa COVID-19. Mgbochi amachibidoro na mpaghara 5 kwuru na "mpaghara ọrịa" - ọkachasị Nairobi, Kajiado, Machakos, Kiambu, na Nakuru (ndị "mpaghara ise").
Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa, bụ ugbu a na-ekenye ya ọrụ na Ivory Coast ma kwupụta nchegbu ya banyere ọnọdụ dị na Kenya. Ọ dọrọ aka na ntị na mba ekwesịghị imeghe ngwa ngwa ngwa ngwa kama na ugbu a itinye uche na njem mpaghara ma ọ bụ nke ụlọ.
Juergen Steinmetz, Onye isi oche nke Network Njem Nleta Ụwa, kwuru, sị: “Kenya abụghị naanị ya. Ugboro nke atọ na-awakpo ọtụtụ Europe, Brazil, na akụkụ ụfọdụ nke United States. Na Hon. Najib Balala enwetala anyị Ọnọdụ ndị dike anyị na amaara na itinye nchekwa na ihe gbasara aku na uba. Nje virus a bụ ihe a na-apụghị ịkọwa akọwa, na Kenya na-emere ndị ya ihe kwesiri n'oge a.
“Withdị usoro ịkpachara anya a, Kenya ga-apụtawanye ma sie ike na mpaghara njem njegharị ụwa.”
N’ozi o nyere taa, Hon. Najib Balala gwara ndị Kenya ibe ya: Oge ikpeazụ m gwara gị okwu gbasara ọrịa COVID-19 bụ Fraịde, ọnwa Machị 12 afọ a. Ebughị m n'obi ikwu okwu n'okwu a ruo mgbe usoro anyị mere na Machị 12, 2021, lapses na 30 ụbọchị ruo ụbọchị 60. Taa, ụbọchị 14 ka e mesịrị, ndị ọrụ ọgwụ na ahụ ike enyerela m aka ịgbanwegharị usoro anyị mere na Machị 12 afọ a.
Mgbochi mgbochi ọhụrụ nke ndị nnọchi anya US na Kenya gụnyere ihe ndị a: